/ ထုတ်ကုန်များ / အခြားသူများက / Methandrostenolone (Dianabol) အမှုန့်
SKU: 72-63-9. အမျိုးအစား: အခြားသူများက
အမည်: Methandrostenolone (Dianabol) အမှုန့်
ပွိုင့်အရည်ပျော်: 165-166 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
စတီရွိုက်သံသရာအတွက် Methandrostenolone (Dianabol) အမှုန့်သုံးစွဲမှုကို
Methandrostenolone (Dianabol) အမှုန့်ကိုလည်း Methandrostenolone အမှုန့်, methandienone, Dianabol အမှုန့်, dbol, Averbol, Danabol, Metanabol, Naposim, Vetanabol အဖြစ်ရည်ညွှန်းသည်။
Dianabol အမှုန့်များအတွက်သောက်သုံးသောအကွာအဝေးသည်ပုံမှန်အားဖြင့် 20-50 မီလီဂရမ် / နေ့ဖြစ်၏။
ပုံမှန်အားဖြင့်, ဒီအသုံးပြုမှုထိုးဟိုစတီရွိုက်၏ 500-1000 မီလီဂရမ် / တပတ်စုစုပေါင်းအကြောင်းကိုနဲ့ပေါင်းစပ်ထားသည်။
စံ Dianabol အမှုန့်ဆေးများအတွေ့အကြုံနှင့်တစ်ဦးချင်းစီအလိုဆန္ဒများပေါ် မူတည်. လွန်စွာကွဲပြားပါလိမ့်မယ်။ အင်တာနက်ကောလာဟလနှင့်ဒဏ္ဍာရီနေသော်လည်းအရည်အသွေး Dbol တက်ဘလက်တစ်နေ့လျှင် 15mg သကဲ့သို့နည်းနည်းနှင့်အတူထူးဆန်းသောရလဒ်များကိုထုတ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ သို့သော်အများဆုံးနေ့ကထိုးနှုန်းတစ် 20-25mg နှင့်အတူ ပို. စိတ်ကျေနပ်မှုဖြစ်လိမ့်မည်။ စိတျထဲမှာသိမ်းဆည်းထားပါ, ငါတို့ဆေးထိုးတိုးမြှင့်တစ်ဦးချင်းစီအချိန်, ဒီအနုတ်လက္ခဏာဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုတိုးပွားစေနှင့်ထိန်းချုပ်မှုသူတို့ကိုပိုပြီးခက်ခဲစေသည်။
Methandrostenolone အမှုန့်ဟိုအန်ဒရိုဂျင် Steroid တစ်မျိုးဆင်းသက်လာတဲ့ testosterone ဟော်မုန်းဖြစ်ပါတယ်။ တရားဝင်ကမူလတန်းအထီးအန်ဒရိုဂျင် testosterone ဟော်မုန်းတစ်ခုဖွဲ့စည်းပုံပြောင်းလဲပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ Dianabol အမှုန့်ကာဗွန်တဦးတည်းနှစ်ဦးအနေအထားမှာတစ်ဦးကဆက်ပြောသည်နှစ်ဆနှောင်ကြိုးနှင့်အတူ testosterone ဟော်မုန်းဟော်မုန်းဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်အနည်းငယ်အပြောင်းအလဲတချို့ဟော်မုန်းရဲ့အန်ဒရိုဂျင်သဘောသဘာဝလျော့နည်းစေသည်။
Methandrostenolone (Dianabol) အမှုန့်စျေးကွက်
Methandrostenolone အမှုန့်ကိုဝယ်ခြင်းငှါဘယ်လို: AASraw ထံမှ Dianabol အမှုန့်ကိုဝယ်
AAS ကုန်ကြမ်းပါးစပ်အမြောက်အများအမြတ်အသုံးပြုမှုများအတွက်မြေအောက်ဓာတ်ခွဲခန်းများမှသန့်ရှင်းစင်ကြယ် 99% Methandrostenolone / Dianabol ကုန်ကြမ်းအမှုန့်ဖြစ်သည်။
အဘယ်မှာရှိမြင့်မားသောသန့်ရှင်းစင်ကြယ် Dianabol အမှုန့်ကိုဝယ်ခြင်းငှါ?
DianabolMethandrostenolone powdereffects, သောက်သုံးသော, သင်သိသင့်အရာအားလုံးကို !!!